बुद्धिमत्ता बनेको डिजाइन: Must१ हुनुहोस् जी ली लोगो क्रिएटिव अनलाइन
त्यहाँ शब्दहरू र अवधारणाहरू हुन् जसले हामीलाई शब्द गेम र छविहरू अपेक्षाकृत सरल तरिकाले प्रस्ताव गर्न सक्दछन्। एउटा राम्रो उदाहरण छनोट हो जुन मँ आज तपाईलाई ल्याउँदै छु। कोरियाली डिजाइनरले प्रस्तावहरूको एक श्रृंखला जी ली त्यसले उसलाई नेटमा धेरै मान्यता प्राप्त गर्‍यो र यो अनौठो होइन। तिनीहरूको संगठनहरू शक्तिशाली र तिनीहरूको दृश्य र वैचारिक winks पकड गर्न पर्याप्त चौंकाउने बाहिर निस्के। सत्य यो हो कि म उनीहरूको प्रोजेक्टको साथ प्रेममा छु, तिनीहरू बुद्धिमान, ताजा र मूल देखिन्छन्।
म निश्चित छु कि यी लोगोहरूले तपाईको जिज्ञासा जगाउँदछ त्यसैले म तपाईलाई भन्छु कि तपाईले यस लेखकको अधिक आफ्नो सामाजिक नेटवर्कमा पाउन सक्नुहुन्छ (फेसबुक, इन्स्टाग्राम y twitter) वा सीधा तपाईंको मा आधिकारिक पृष्ठ। जिज्ञासाको रूपमा, म तपाईंलाई भन्नेछु कि उहाँ साइकल, ज्याज र शब्द खेलहरूका प्रेमी हुनुहुन्छ, यद्यपि उत्तरार्ध स्पष्ट रूपमा स्पष्ट छ।
जब गुरुत्वाकर्षणको शक्ति अक्षरशः हामीलाई देखाइन्छ जब अक्षरहरू हाम्रो आँखा अगाडि आफ्नै वजनमुनि आउँछन्।
सुरुnelको प्रवेश र बाहिर निस्कने अंग्रेजी शब्दको डबल "n" द्वारा पूर्ण रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।
एक पत्र ठूलो पार्छ र हामी समसामयिक तरिकामा हुर्कन्छ जबकि बाँकी सबै अक्षरहरू जसले शव्द बनाउँछन् सन्तुलन बाहिर देखा पर्दछ र कमजोर भयो।
हाम्रो पत्र X एक जीवित अस्तित्व बन्छ र यसको चरम सीमा बाट बाहिर निस्कनुहोस् शब्द बाट भाग्छ, जबकि पत्र म एक खुला ढोका जस्तो देखिन्छ।
द्रुत फूड शब्द बनाउने अक्षरहरूको घनत्व र शरीर यस खानेकुराको उपभोक्ताको शरीरले गरे जस्तै बढ्छ।
बिरामीको अर्थ बिरामी छ, यहाँ हामी स्ट्रेचरमा आराम गरी रहेको पुतलीको माध्यमबाट शब्दको प्रतिनिधित्व देख्छौं।
आधा विभाजित अक्षर G ले कलाकारको कानमा दुखित भएको कटलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
पहिलो अक्षर विपरित उल्टो बदलेको छ, सजिलै बिस्मयादिबोधक बिन्दु वा उल्टो व्यक्तिलाई गल्तीले गलत बनाउँदछ, सृजनात्मकता, चतुराई र रचनात्मक प्रक्रियामा भावना दुवै।
रोबी डकैतीमा अनुवाद गर्दछ। अक्षरशः अक्षर E मा डकुमेन्ट हुन्छ।
मुस्कान (मुस्कान) लाई अक्षर I र l को संयोजनको माध्यमबाट ईमोटिकन winking र मुस्कानको प्रतिनिधित्वको लागि प्रस्तुत गरिन्छ।
अक्षर S को वक्रता सागरको छालमा लहराती आकारलाई प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गरिन्छ।
मेरो मनपर्नेहरू मध्ये एक! V र A को आरोहण वा तलका संकेतकहरू र कुनै पनि लिफ्टको बटनहरूमा प्रतीकहरू।
एस लेटरले आफ्नो ओहदा त्याग्ने निर्णय गरेको छ किनकि यो १ number नम्बर हो, हामी अन्धविश्वासको बारेमा कुरा गर्दैछौं, तपाईले के आशा गर्नुभयो?
कुनै पनि दिशामा यौन सम्बन्धलाई प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै नै ग्राफिक तरीका।
अक्षर आरको ​​पुच्छर विच्छेदनपूर्वक देखापर्छ, त्यो व्यक्तिले पेशाब गर्ने तरिका सम्झना गर्छ र यसरी जोड दिन्छ कि हामी पुरुष इलाकामा (केही जंगली हिसाबले) छौं।
पहिलो हे हामीलाई शाब्दिक सूर्यास्त र दोस्रो दृश्यमा चन्द्रको उपस्थिति देखाउँदछ।
अक्षरहरू एकको शीर्षमा राखिन्छन् र साइकलको आकार अनुकरण गर्दै।
क्लासिक, टी शब्द शब्दको टीले सन्तुलन जस्ता झुकाव छ, न्यायको Quanttessential प्रतीक।
व्हिप्लशको अर्थ ह्विप्लाश हो, त्यसैले हामी अनुमान लगाउन सक्छौं कि पत्र मैले कोर्रालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जसको साथमा अक्षर P कोरिएको हुन्छ। अलि दुःखद, वैसे पनि।
अक्षर M मा एक माकुरोको वेबबाट उल्टो लम्कँदै छ सुपरहीरोको रूपमा।
प्रारम्भिक सीले हाम्रो सम्पूर्ण शब्दलाई समाहित गर्दछ जस्तै यो कन्डम हो।
यो एक लाई धेरै टिप्पणीको आवश्यक पर्दैन, हैन?
अक्षर C र D का वक्रता हास्य (मुस्कान) र नाटक (दु: खी grimace) प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गरीन्छ।
यो अर्को स्पष्ट छ त्यसैले मँ यसमा राम्रो टिप्पणी छैन।
हाम्रो चिठी O ले शून्यको रूपमा कार्य गर्दछ आर्थिक रूपमा मुद्रास्फीति प्रतिनिधित्व गर्न।
हाम्रो दुई ओ को कालो पृष्ठभूमि मा ग्रह पृथ्वी र चन्द्र को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
यी दुई गोलाकार आकारहरू (ओपन डी + ओ) मिलेर बनेको सिलिकॉन शब्द हेरेर हामी यसलाई चाँडै नै सौन्दर्यवादी अपरेशनहरू र महिला बुस्टसँग सम्बद्ध गर्दछौं।
जिपरको आकार क्रमिक पूंजी E को युनियनबाट बनेको छ। चाखलाग्दो।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » इंटेलिजेंस मेड डिजाईन: Must१ अवश्य जी ली लोगो छ
केवल एक स्पष्टीकरण, ह्वाप्लाश ज्यान्ज म्यूजिकल पीसको नाम होन्क लेवीले र यो ड्रमलाई बुझाउँदछ, यो ड्रमस्टिक र झण्डा प्रस्तुत गर्दछ।
मलाई थाहा भएन, योगदानका लागि धन्यवाद डेभिड, बधाई!